Ezona wallpapers eziblue zeMac | ndisuka kuMac
IiWallpapers eziBlue zeMac
Emva kokuzisa kule ndawo, eyona nto ingcono amaphephadonga eMac kwaye okona kulungileyo imvelaphi yeentaba y kubeka, kufuneka ndisondele kuwe ezona wallpapers zibalaseleyo zeMac eluhlaza. Lo mbala, olinganisa ubude bamaza phakathi kwe-460 kunye ne-482 nm, ixabiswa kakhulu ngabaninzi ngenxa yamandla ayo okuphilisa, ukukwazi ukuzola abantu kwaye ngaphezu kwayo yonke into kuba ngumbala ongathathi hlangothi phantse wonke umntu owuthandayo. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngumbala wamanzi, wesibhakabhaka kwaye siwubona njengento yendalo. Yingakho lo mbala njengephepha lodonga yeyona nto ingcono kakhulu onokuthi uyibeke.
Kolu ngeniso lutsha apho ndinethemba lokukuzisela awona maphepha odonga aluhlaza okwesibhakabhaka, ukuqala ngewodwa ongenakuphoswa. Ulwandle Kule meko ndikhethe amanzi azolileyo olwelo oluyimfuneko afumaneka ngokomlinganiselo omkhulu emhlabeni. Ngendlela, imfihlo, ngokuqhelekileyo kukholelwa ukuba ulwandle luluhlaza okwesibhakabhaka ngenxa yokuba lubonakaliso lwesibhakabhaka, nangona kunjalo amalungu e-National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yaseUnited States aseke ukuba le ngcamango ayilunganga. Ngokutsho kweengcali, ulwandle luluhlaza okwesibhakabhaka kuba lubonakalisa ukukhanya kwelanga. Enyanisweni, ulwandle luyamangalisa kangangokuba bambalwa abantu endibaziyo abangatshoyo ukuba luyinto emangalisayo nephazamisayo ngaxeshanye.
Ndimele ndivume ukuba ndiyakuthanda ukukwazi ukubona amanzi ayo, ewe, okoko nje engaphakathi ukuzola kunye nemini. Ebusuku iyandoyikisa kakhulu kwaye xa amanzi exhaphakile okanye xa kukho amaza amaninzi, indinika intlonipho enkulu. Nangona ndiyazi ukuba yiGrail eNgcwele yabaninzi abafuna amaza ukuze bakwazi ukusefa, ndikhetha ukuhlala entlabathini ndibukele indlela abanye abayenza ngayo.
Ngoku, umbala wolwandle usenokungabi luhlaza okwesibhakabhaka ngenxa yokuba umbala wesibhakabhaka awubonakali, kuba isibhakabhaka siluhlaza. Kulungile akusoloko, kunjalo. Sinawo ukutshona kwelanga, nokuphuma kwelanga, noko ukutshona kwelanga okufana nomlilo, okudaye isibhakabhaka sibe bomvu. Kodwa ke ukuba sithi ukucinga ngento eluhlaza, ngoko nangoko siya ezulwini Yiyo loo nto kubalulekile kwesi sithuba sijongana neyona yamaphephadonga aluhlaza okwesibhakabhaka eMac, ungalibali ngesibhakabhaka. Nantsi eminye imifanekiso endiqinisekile ukuba uya kuyithanda.
Masiqhubeke sijonga kumbala ozuba, ukuba ayizizo zonke izinto ezingamanzi kunye nesibhakabhaka. Sifumana umbala kwenye yeeyure zosuku ezixatyisiweyo ngabafoti abaninzi. Ibizwa ngokuba iyure eluhlaza, Ikwabizwa ngokuba yiyure yomlingo kwaye ngoku uya kusazi ukuba kutheni. Ngokuchazwa lixesha eliphambi kokuphuma kwelanga naphambi kokutshona kwelanga. Ukukhanya kwesi sihlandlo kuthambile, kusasazeka, kunomlingo. Yenza yonke into oyibonayo ibonakale izolile. Kumaphepha odonga alandelayo, uya kubona ukuba kutheni le nto ingumlingo. Yonke into ithatha enye indlela kwaye loo mibala inika umlingo ngokwendalo.
Imibala ibaluleke kakhulu. Njengoko benditshilo ngaphambili, iblue ifana nokuzola. Imibala inamandla okuvuselela iimvakalelo ezahlukeneyo, ukuvelisa iimvakalelo. Uluhlaza okwesibhakabhaka ngumbala ohambelana nendalo. Xa sibona isibhakabhaka njengezo zangaphambili, sibona ukuba imini icacile kwaye izolile. Loo nto isenza sizive sonwabile. Kodwa njengoko sibonile kwimifanekiso yeyure eluhlaza okwesibhakabhaka, sinokukwazi ukuyidibanisa neendawo ezibandayo kunye nomkhenkce. Ukuba sicinga ngokucophelela, i-shades eluhlaza okwesibhakabhaka idibanisa kwiindawo ezinekhephu kunye neqhwa. Kodwa oko kukwathandwa kakhulu ngabantu abaninzi.
Kodwa iblue ayiyodwa kwindalo. Sibona luhlaza kwiindawo ezininzi kwaye ngumbala odibanisa nabanye abaninzi. Ngumbala oluncedo kakhulu. Ngapha koko, kukho iiwallpapers ezilungileyo kakhulu zisebenzisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphakathi imifanekiso ebizwa ngokuba yingqiqo. Ezo zikhangeleka ngathi azithethi nto okanye azinangqiqo kodwa ezikubambayo kamsinya nje wakubabona kwaye awukwazi ukuyeka ukuzijonga. Uza luncedo njengephepha lodonga kwiiMacs zethu. Nazi ezinye endithemba ukuba uyazithanda.
Sinokufumana kwakhona imifanekiso ye imihlaba enombala oluhlaza njengomdlali oyintloko. Kuyinyani ukuba ukuba asisebenzisi nje isibhakabhaka, ulwandle okanye iyure eluhlaza, ukhetho lubonakala lunqongophele kodwa lukhona. Siza kubeka eminye imizekelo kwaye ndiqinisekile ukuba eminye yayo iya kunyulwa ubuncinci ngexesha lokuhamba nawe kwimisebenzi yakho ngekhompyuter.
Sinokukhetha loo mifanekiso ukuba, nangona sisazi ukuba ayiyonyani kwaphela, sinokuyibandakanya kuba, emva kwayo yonke into, malunga nayo kukunika umbala omncinci kwizikrini zethu zekhompyuter. Iphepha lodonga elenza amehlo ethu onwabe xa silayita. Yiyo loo nto nam ndizakongeza enye loo nto Mna ngokobuqu ndiyabathanda Kwaye ndiqinisekile ukuba ziya kukonwabisa nawe.
Ngendlela, kukho imibala emininzi yamaphephadonga blue ezi abstract ngokupheleleyo kwaye oko kuya kuba luncedo kwabo bantu bafuna i-minimalism kwi-Mac yabo. Ndisebenzisa eli gama kuba ndiyazi abantu abaninzi abafuna ukuba ingxowa-mali yabo ibe yi-aseptic kangangoko kunokwenzeka ukuze bagxininise kwizinto ezithathwa njengebaluleke kakhulu. Gcina ukhumbule ukuba kule nto, kufana neencasa kwaye njengoko bethetha, ukunambitha imibala. Kodwa kule meko sigxininisa blue.
Njengoko besesitshilo ukuba iblue izolile kwaye izolile. Kodwa ndingakuqinisekisa oko ikwangumbala wokuhlekisa, ubuncinane ngokubhekiselele kwiikhompyuter. Ngoku uya kuqonda ukuba kutheni ndikuxelela. Gcina ukhumbula ukuba kum kubonakala kuyenye yeempazamo ezinkulu ezikhethwe yinkampani yeMicrosoft. Inkcazo yesikrini esiluhlaza ide yasetyenziswa kwimisebenzi yemihla ngemihla yobomi bethu. Ukuthathela ingqalelo oko kuthetha ukuba kukho into embi eyenzekileyo kwaye sisibhengezo sento ezayo esiphelweni. Ukhethwa njani umbala ozuba ukuze ulumkise ngento embi? Ngapha koko, yiWindows hehehehe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IiWallpapers eziBlue zeMac
I-iPhone 13 ifumaneka kwiAmazon ngee-euro ezingama-819 kuphela